UX Design and SEO: Kedu ka ihe nrụọrụ weebụ abụọ a nwere ike isi rụọ ọrụ ọnụ maka uru gị | Martech Zone
N'ime oge, atụmanya maka weebụsaịtị agbanweela. Atụmanya ndị a setịpụrụ ụkpụrụ maka etu esi arụ ọrụ onye ọrụ nke saịtị ga-enye.
Site na nchọta engines na-achọ ịnye nsonaazụ kachasị mkpa na afọ ojuju na ọchụchọ, a na-echebara ụfọdụ ihe ogo echiche. Otu n'ime ihe kachasị mkpa n'oge a bụ ahụmịhe onye ọrụ (yana saịtị dị iche iche na-enye aka na ya.). Ya mere, enwere ike ịkọwapụta na UX bụ akụkụ dị mkpa nke njikarịcha njin ọchụchọ.
N'iburu nke a n'uche, ị ga-ahụrịrịrị ịme UX gị dị oke mkpa. Site n'inwe ike ịnye UX kwesịrị ịja mma, ị na-akwalite SEO saịtị gị.
Ihe ndị a bụ ụzọ otu ị ga - esi bulite otu esi eji UX iji meziwanye mpaghara a nke atụmatụ SEO gị:
Na-agwa Ozi Architecture na gị na saịtị
Otu n'ime ihe ndị kachasị akụkụ dị mkpa nke imewe UX bụ otu esi etinye ozi gị. Ọ dị mkpa iburu n'uche na saịtị gị kwesịrị ịnwe ụlọ ọrụ ozi-enyi na enyi iji hụ na ndị ọrụ gị ga-enwe ike iji saịtị gị mezuo ebumnuche ha. Ebumnuche bụ iji hụ na ebe ahụ ị ga-enwe ike ịnye nhazi saịtị zuru ezu dị mfe ma bụrụ nke na-enweghị nghọta, na-enye ndị ọrụ ohere iwetu ojiji nke saịtị gị maka ebumnuche ha.
Desktọpụ Apple na Mobile View
Idozi Navigation Weebụ
Ọzọ UX imewe mmewere iji tụlee bụ saịtị gị igodo. Ọ bụ ezie na ọ bụ echiche dị mfe ịnwe atụmatụ atụmatụ igodo nke na-enyere ndị ọrụ aka ịga nke ọma gaa n'akụkụ dị iche iche nke saịtị gị, ọ bụghị saịtị niile nwere ike ime nke ahụ. Kwesịrị ị na-arụ ọrụ na-abịa na a na-arụ ọrụ igodo atụmatụ na Aims na-enye ụzọ kacha mfe iji na gburugburu gị na saịtị.
Ọ kachasị mma ịhazi usoro igodo saịtị gị ka ọ bụrụ ndị isi.
Uzo mbu nke ndi isi aha gi bu igodo uzo gi nke nwere otutu akwukwo nke saiti gi. Isi igodo gi kwesiri ibu onyinye mbu nke ahia gi, ya na ibe ndi ozo ndi ozo nke saịtị gi kwesiri inwe dika ihe banyere anyi.
Igodo nke abụọ gị bụ igodo ọrụ gị nke dịkwa mkpa peeji nke saịtị gị, mana ọ nwere ike ọ gaghị adị oke mkpa dị ka ndị a ga-etinye na isi igodo. Nke a nwere ike ịgụnye Kpọtụrụ anyị peeji nke, na ibe ndị ọzọ nke saịtị gị.
I nwekwara ike ịmụta multi-larịị, ma ọ bụ mega navigation ebe gị menu pụrụ iduga sub-menus. Nke a bara ezigbo uru maka ikwe ka ndị ọrụ gị gwuo miri emi na saịtị gị site na mkpanaka ụzọ gị. Nke a bụkwa nhọrọ nke igodo maka azụmaahịa nwere ọtụtụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ike jupụta n'ụdị dị iche iche. Agbanyeghị, ihe ịma aka maka nke a bụ iji hụ na ogwe menu gị ga-arụ ọrụ nke ọma dịka enwere ụfọdụ saịtị ndị nchịkọta nhọrọ nchịkọta dara ọbụna tupu ị ruo na ibe achọrọ.
Ọzọ, echiche a bụ iji hụ na ị ga-enwe ike inye ndị ọrụ gị ikike iji ọsọ na nwayọ weghachite saịtị gị. Ihe ịma aka bụ nka a atụmatụ igodo onye ọrụ nke ahụ ga-enwe ike imezu nke ahụ.
Na-arụ ọrụ na imeziwanye weebụsaịtị gị
Mpaghara ọzọ na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ bụ ọsọ nke weebụsaịtị gị. Ọ dị oké mkpa ka saịtị gị nwee ike ibudata ngwa ngwa, ma ọ bụ ịnwere ike ịnwe nnukwu nfu.
Ọ bụrụ na saịtị gị adabaghị ịkwado n'ime sekọnd 3, nkwụghachi ụgwọ gị ga-agabiga ụlọ. Mana ọbụghị naanị na peeji gị kwesịrị inye ngwa ngwa, mana ị ga - enwe ike ịhapụ ndị ọrụ gị ka ha gaa na ibe ndị ọzọ were were.
Iji nwee ike imezu nke a, saịtị gị kwesịrị ibu ụzọ hụ na saịtị gị na-agba ọsọ na akụrụngwa arụmọrụ. Sava gị ma ọ bụ ọrụ nnabata ị rụpụtara kwesịrị inwe ike ịkwado saịtị gị na ọnụọgụ ndị ọrụ ga-eleta ya, na-eme ka ndị mmadụ niile rụọ ọrụ ngwa ngwa.
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji hụ na saịtị gị dị mfe, na - enweghị faịlụ dị egwu nke nwere ike ibute nsogbu na saịtị gị. Ọ bụ ezigbo echiche ịnwe faịlụ mgbasa ozi dịgasị iche iche, mana ndị a kwesịrị idobe ha na opekata mpe, naanị mgbe ọ dị mkpa.
UX Design Kwesịrị Conbụ Ntọala-Enyi na Enyi
Nkọwapụta ebumnuche ebumnuche ọhụụ nke mkpokọta ntụgharị okporo ụzọ weebụsaịtị, njikarịcha injinị webpage, nyocha websaịtị yana mmepe ọdịnaya. Kewapụrụ na nkecha agba ndabere
Iji hụ na atụmatụ UX nke saịtị gị ga-eweta nlọghachi, ị kwesịrị ịkpụzi ya na ntụgharị n'uche. Nke a gụnyere iji oku oku na-eme ihe, yana atụmatụ ndị ọzọ na-atụgharị uche.
Ma hụkwa na ọ bụrụgodi na ị gbalịsiri ike ime ka ntụgharị a na-agba ume, ị gaghị agafe ụlọ ma daa ka ị na-ere ahịa na saịtị gị niile. Ebe nrụọrụ gị kwesịrị ịbụ, karịa ihe ọ bụla, lekwasịrị anya ndị ọrụ. Ihe niile gbasara ịrụ ọrụ na saịtị gị iji nwee ike ịnye ahụmịhe kachasị mma. Mgbe ị na-eme nke ahụ, ịnwere ike iwekọta usoro nkwado nke nwere ike ịme ka ntụgharị gaa n'ihu.
Inweta Uru nke agagharị na nzaghachi
N'ikpeazụ, ị ga-elekwasịkwa anya na mkpa ọ dị ije na ịzaghachi - akụkụ abụọ nke ịba ụba nke ekwentị na mmụba ọchụchọ na ojiji saịtị sitere na ngwaọrụ ejiri.
Ebe nrụọrụ gị ga-enwe ike ịnye otu ọkwa ahụmịhe dị mma maka ndị ọrụ mkpanaka ma e jiri ya tụnyere ụzọ ọdịnala nke weebụsaịtị. N’iburu nke ahụ n’uche, ọ kachasị mma imepụta saịtị gị ka ọ bụrụ ihe a na-anabata mgbe a na-enweta ya site na ekwentị mkpanaaka. Ewezuga ịbụ mmewere nke ahụmịhe onye ọrụ, mmeghachi omume ekwenti bụ isi ihe na-eme n'ọkwa n'onwe ya, ọkachasị na igwe na-achọ ihe na ntanetị ugbu a.
Ọ kachasị mma ịnabata usoro ntanetị weebụ, nke na-enye gị ohere ka saịtị gị gbanwee onwe ya na ngwaọrụ ọ bụla na-enweghị mkpa iwepụta ọtụtụ nsụgharị nke saịtị gị.
Mbota UX maka SEO ka mma
Malite na onye ọrụ ahụmahụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji bulie weebụsaịtị gị na 2019 ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ dị oke mkpa, ọ bụ ihe ziri ezi ịrụ ọrụ iji meziwanye ya. Enwere otutu uzo, ma ufodu n’ime ihe kachasi mkpa edeputara n’elu. Ma ọ dịkarịa ala rụọ ọrụ na mpaghara ise a, ị ga-anọkwa n'ụzọ ziri ezi iji hụ na saịtị gị ga-enwe ohere ka mma ịnweta ebe ka mma na nsonaazụ ọchụchọ.
Tags: obodo seoMobile na Mbadamba ụrọnyocha ọchụchọnzaghachiux imewe